Fizarana ao amin'ny Gadget Actualidad
Vaovao momba ny gadget mikendry ny hanolotra teboka fihaonana ho an'ireo izay tia gadget, solosaina ary teknolojia amin'ny ankapobeny. Misaotra an'i ekipa mpanonta manam-pahaizana anay izahay dia afaka manolotra atiny avo lenta avo lenta ary manana ny tery farany ilaina, izany hoe ankafizin'ny mpamaky anay ary teboka manan-danja izay mampiavaka antsika amin'ny fifaninanana.
Nanangana atiny ho an'ity tranonkala ity izahay hatramin'ny 2005, noho izany dia niatrika lohahevitra maro samy hafa be izahay. Mba hahamora kokoa anao amin'ny fitadiavana ireo vaovao tadiavinao, eto ambany izahay dia manolotra ny lisitry ny lohahevitra izay nandaminana ny tranokalanay.
Automatique ao an-trano